Shirkadda Golis iyo hawlihii ay asbuucan ka qabatay Garoowe | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis iyo hawlihii ay asbuucan ka qabatay Garoowe
Shirkadda Isgaarsiinta Golis Telecom oo had iyo jeer kaalin muuqata ka qaadata horumarinta arrimaha bulshada ayaa ka qayb qaadatay munaasabaddii ay xilalka kula kala wareegayeen duqii hore ee magaalada Garoowe iyo duqa Cusub.
Waxa kamid ahaa shaqooyinkii ay shirkadda Golis ka qabatay xafaladda xilwareejinta duqa magaalada Garoowe ;Qurxinta madasha xafladdu ka dhacaysay, rakibidda internet xawaarihiisu sareeyo oo ay warbaahintu ku baahinaysay munaasabadda si loo gaarsiiyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee kala joogta daafaha caalamka iyo iyo hawlo kale oo qurxiyay munaasabadda.
Shirkadda Golis waxay sidoo kale waxay dhiirigalin mug-leh usamaysay bahda cayaaraha gobalka Nugaal iyadoo door wayn ka qaadatay maalgalinta tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay kooxaha ka ciyaara gobalka Nugaal.
Dhalinyarada ka qayb galayay tartankaas iyo masuuliyiinta cayaaraha gobalka ayaa shirkadda Golis uga mahadceliyay sida wanaagsan ay uga qayb qaateen maalgalinta koobka la dhex dhigay kooxaha gobalka Nugaal oo ay ka dhexli doonaan is dhexgal iyo horumar ciyaareed.
Dhinaca kale shirkadda Golis waxay qayb muhiim ah ka qaadatay mashruuc loogu talagalay isku xirka wasaaradaha Puntland islamarkaana ay shirarkooda ku qabsan karaan hab wicid ah oo maqal iyo muuqaal ah iyadoo la isticmaalayo Internetka shirkadda Golis.
Xafladdii lagu daahfuray mashruucan oo uu xarigga kajaray madaxweyne ku xigeenka Puntland C/Xakiim Xaaji Cumar Camey ayuu ku amaanay shirkadda Golis doorka ay ka qaadato horumarinta ha’yadaha dawladda iyo guud ahaan arrimaha bulshada.